प्रधानन्यायाधीशको सोधाई : कुन सांसदले कसलाई भोट हाल्छ भन्ने हेर्ने काम राष्ट्रपतिको हो र? - Kantipath.com
प्रधानन्यायाधीशको सोधाई : कुन सांसदले कसलाई भोट हाल्छ भन्ने हेर्ने काम राष्ट्रपतिको हो र?
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले कुन सांसदले कसलाई भोट हाल्छ भन्ने हेर्ने काम राष्ट्रपतिको हो र? भन्ने प्रश्न गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बिहीबार सुनुवाइका क्रममा उनले प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायी अग्नि खरेललाई उक्त प्रश्न गरेका हुन्।
‘राष्ट्रपतिकाे काम कर्तव्यको दायित्वभित्र कुन सदस्यले भाेलि कसलाई भोट हाल्छ कि हाल्दैन भनेर हेर्ने हो र?’, राणाले सोधे। बहसका क्रममा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका खरेलले ह्वीप लगाएपछि एमाले सांसदले शेरबहादुर देउवाका पक्षमा मत दिन नसक्ने बताए। ‘ह्वीप लाग्ने अनिवार्य भएकाले राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउवाकाे दाबी अस्वीकार गर्नुभयाे’, खरेलले भने।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले फेरि सोधे, ‘ह्वीप लगाउनु अनिवार्य हाे र? एमालेले नलगाएकाे परिस्थितिमा के हाेला?’ प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँगै न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ ७ गते राति प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्।
अब बहसका लागि साढे ४ घण्टा मात्र समय बाँकी रहेको छ। बुधबार सरकारी पक्षको बहस सकिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका कानुन व्यवासीले बहस थालेका छन्। प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवासायीलाई उपलब्ध गराइएको समयमा अब साढे तीन घण्टा बाँकी छ।
Previous Previous post: नेपाली कलेजलाई विश्वस्तरको अवार्ड
Next Next post: अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा तामाङ कर्याप्यै